खै, हामीले के पढ्यौँ ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
खै, हामीले के पढ्यौँ ?
२०७१ बैशाख १४, आईतवार ००:१३ गते
विद्यालयमा जानु, विश्व–विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्नु, विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा भर्ना भएर परीक्षा दिनुले मात्र हाम्रो ज्ञानको आवश्यकता परिपूर्ति नहुन सक्दछ । ज्ञान भनेको जानकारी नभएर ठीक र बेठीकको उचित छिनोफानो गर्ने आन्तरिक शक्तिको नाम हो । जबसम्म व्यक्ति उचित र अनुचितको भेद पर्गेल्न सक्दैन, तबसम्म उसले पढेको छैन भनेर बुझ्नुपर्दछ । ज्ञान पाउनु भनेको नै जीवनलाई उचित बाटोतिर लिएर जानु हो । पशुहरुमा यो दिव्य ज्ञानको अभाव हुने गर्दछ । यसैले, उनीहरु ठीक–बेठीकको उचित विवेचन गर्न सक्दैनन् । मनुष्यको ज्ञानले उसलाई यही कर्तव्य र अकर्तव्यको विवेचन गर्ने ऊर्जा प्रदान गर्ने गर्दछ । यही ज्ञान शक्तिका आधारमा नै मनुष्य पशुभन्दा भिन्न भएको हो ।
सबैभन्दा विचारणीय त के छ भने नपढेका हुनाले कसैले ठीक र बेठीक छुट्याउन नसक्दा जीवनमा धेरै बेठीक भइरहेको कुरालाई सामान्य मान्न सकिएला, तर पढेर पनि यदि जीवनमा बेठीक भइरहनुलाई के
भन्ने ? प्रशस्त अध्ययन अध्यापन गर्दागर्दै पनि हामीले उचित र अनुचितलाई समान मान्न थाल्यौँ भने त्यतिखेर के गर्ने ? यो आजको अहम् प्रश्न हो । आज ज्ञानी मान्छेको कमी छैन । हिजोभन्दा आज उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मानिसको सङ्ख्या बढेर गएको छ । नयाँनयाँ विषयहरु पनि थपिएका छन्, विश्वविद्यालय र विद्यापीठहरु पनि थपिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि किन बेथितिहरु हट्न सकेनन् ? किन धेरै पढेका मानिस पनि सुखी र शान्त हुन सकेनन् ? किन तिनले निरक्षर र अज्ञानीका दुःखपीडा घटाउन सकेनन् ? यी विचार नगरी नहुने प्रश्नहरु हुन् ।
गीताको तेह्रौँ अध्यायका केही श्लोकहरुमा भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ ः
भगवान् श्रीकृष्णले ज्ञानीहरुले सधैँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख र दोषहरुको पटकपटक स्मरण गर्नुपर्दछ भनेर भन्नुभएको छ । हामी किन जन्मियौँ ? मृत्यु के हो ? बुढ्यौली किन हुन्छ ? दुःख भनेका के हुन् ? किन दोषमुक्त हुन सकिँदैन ? यस्ता प्रश्नहरुमाथि घोत्लिँदै जाँदा हामीले जीवनको वास्तविकता बोध गर्न सक्दछौँ । भगवान् बुद्धले यही गर्नुभएको थियो । यस्ता प्रश्नहरुमाथि निरन्तर चिन्तन गर्दै जाँदा हामीले आपूmलाई काम, क्रोध, लोभ र मोहजस्ता अनेक वृत्तिहरुबाट पनि टाढै राख्न सक्दछौँ । हामीभित्रको पवित्रता अझ बढेर जान्छ । जीवन–मृत्युसम्बन्धी शाश्वत् विषयमाथिको चिन्तनले हामीभित्र सत्यको गहिरो प्रभाव पर्दछ । भौतिक संसारको अनावश्यक लाभहानिको चक्करबाट पनि हामी मुक्त बन्न सक्दछौँ । यही नै प्रज्ञावान्हरुको
लक्षण हो ।
मेरो–मेरो भन्ने भावलाई ममता भनिन्छ । ज्ञानीहरुले आपूmलाई
जहिले पनि प्रकृतिको एउटा साधन ठान्दछन् । उनीहरुलाई लाग्दछ, हामी भनेका परमात्माको योजनाबमोजिम मनुष्य जीवन पाएका हौँ र यस धरतीमा आएका हौँ । हामीले केवल कर्म गर्नुछ । कर्मको फल के–कस्तो हुन्छ भन्ने उनै परमात्माले निर्धाराण गर्दछन् । यस्तो दृष्टि राख्ने हुनाले उनीहरुले कहिल्यै पनि ममताको डोरीभित्र आपूmलाई कैद राख्दैनन् । त्यसकारण, वास्तवमा ज्ञानीहरुले आफ्ना सबै उपलब्धि, सफलता, सिद्धि र सम्पत्ति उनै परमात्मा र परमार्थका लागि लगानी गर्न मन पराउँछन् । यसैले, उनीहरु ममतामुक्त हुन्छन् ।
विषयासक्त मानिसको समुदायमा पनि नबस्नु भनेर भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको
छ । ज्ञानी मान्छे यदि विषय—वासनाले भरिएको र भौतिक संसारको रुप–सौन्दर्यलाई नै सबैथोक ठान्ने मानिसहरु भएको समाजमा बस्यो भने बिस्तारै उसमा पनि त्यसको प्रभाव पर्दै
जान्छ । ज्ञानको चर्चाका ठाउँमा विषयचर्चाले स्थान पाउन थाल्दछ । त्यसैले, जो त्यस्ता विषयासक्तहरुदेखि मुक्त रहन्छ, त्यो ज्ञानी हो भनेर भनेर ज्ञानीको लक्षण गरिएको छ ।
यसप्रकार, भगवान् श्रीकृष्णले ज्ञानका विभिन्न लक्षण बताउनुभएको छ । हामीले पनि आपूmभित्र यी लक्षणहरुको खोजी गरौँ । हेरौँ,
बुझौँ । नभए अभ्यास गरौँ । गीताले ज्ञानका अनेक आयामहरुलाई प्रस्तुत गरिदिएको छ र परिचित समेत तुल्याएको छ । ज्ञान कहिल्यै पनि अहङ्कारमा विश्वास गर्दैैन, अशुद्धिमा विश्वास गर्दैैन र क्षणभङ्गुरतामा विश्वास गर्दैन । यसैले, वास्तविक ज्ञान गीतामा उल्लेख भएजस्तै अभिमानको अभाव हो, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरूभक्ति र शुद्धीकरण
हो । ज्ञान इन्द्रिय व्यवस्थापन र अनासक्ति मात्रै होइन, अनहङ्कारिता र जन्ममृत्युबारेको चिन्तन पनि हो । ममता नहुनुलाई पनि ज्ञान भनिएको छ भने इष्टानिष्ट दुवै अवस्थामा समान रहनु पनि ज्ञान हो ।